Medical Writings ဆေးပညာစာများ: High Blood Pressure Drugs သွေးကျဆေးများ
High Blood Pressure Drugs သွေးကျဆေးများ
Hypertension သွေးတိုးအတွက် သုံးရတဲ့ဆေးက အမျိုးပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ သင့်တဲ့ဆေး ရွေးပေးတယ်။ ဆေးပြောင်းသုံးရတာလဲ ရှိမယ်။ သွေးဖိအားကျ-မကျနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ကြည့်ရတယ်။ ဆေးတမျိုးထဲမကလဲ တွဲပေးတာလဲ ရှိတယ်။ ဆေးအဆကိုလဲ တိုးတာ၊ လျှော့တာရှိတယ်။ တခါတိုင်းလို့ သွေးဖိအား ကျနေပေမဲ့ ပျောက်သွားပြီ ထင်တာ မှားတယ်။ တသက်တာလုံး သွေးဖိအားကို စစ်ဆေးနေရမယ်။ ဆေးတွေချည်းနဲ့လဲ မရသေးဘူး။ အစား-အသောက် (ဆားရှောင်-အဆီလျှော့)၊ ကိုယ်လက်လှုတ်ရှား၊ စိတ်ဖိအား ချတာတွေလဲ လုပ်နေရမယ်။
1. Diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးတွေ
ကျောက်ကပ်ကနေ သွေးထဲက ဆားဓါတ်ကို များများစွန့်ထုတ်ပေးစေတယ်။ ဆားနဲ့အတူ ရေပါထွက်စေလို့ သွေးထုထည် နည်းသွားစေတယ်။ သွေးဖိအား ကျစေမယ်။
- Aldactone (Spironolactone)
- Dyrenium (Triamterene)
- Esidrix, Hydrodiuril, and Microzide (Hydrochlorothiazide or HCTZ)
- Hygroton and Thalitone (Chlorthalidone)
- Lozol (Indapamide)
- Midamor (Amiloride hydrochloride)
- Mykrox and Zaroxolyn (Metolazone)
Combination diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးတွေ တမျိုးမက ရောထားတာလဲရှိတယ်။
- Aldactazide (Spironolactone and Hydrochlorothiazide)
- Dyazide and Maxzide (Hydrochlorothiazide and Triamterene)
- Moduretic (Amiloride hydrochloride and Hydrochlorothiazide)
2. Beta-Blockers (ဘီတာ-ဘလော့ကာ)
နှလုံးခုန်နေတာကို နှေးစေမယ်။ နှလုံးကိုလည်း ညှစ်ထုတ်အား နည်းစေတယ်။
- Blocadren (Timolol)
- Cartrol (Carteolol hydrochloride)
- Coreg (Carvedilol)
- Corgard (Nadolol)
- Kerlone (Betaxolol)
- Levatol (Penbutolol sulfate)
- Lopressor and Toprol XL (Metoprolol)
- Sectral (Acebutolol)
- Tenormin (Atenolol)
- Visken (Pindolol)
- Zebeta (Bisoprolol fumarate)
- Normodyne and Trandate (Labetolol)
3. Alpha-Blockers (အယ်လ်ဖါ-ဘလော့ကာ)
အာရုံကြော သတင်းပေးမှုမှာ သက်ရောက်စေတယ်။ ဆေးအရှိန်ကြောင့် သွေးလွှတ်ကြောတွေ ပြေလျှော့နေစေမယ်။
- Cardura (Doxazosin)
- Hytrin (Terazosin)
- Minipress (Prazosin)
4. ACE Inhibitors (အေစီအီး-အင်န်ဟဘစ်တာ)
Angiotensin-converting enzyme inhibitors လို့လဲခေါ်တယ်။ သွေးလွှတ်ကြောတွေကို တင်းစေတဲ့ Angiotensin II ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းကို ဆန့်ကျင်တယ်။
- Accupril (Quinapril)
- Altace (Ramipril)
- Capoten (Captopril)
- Mavik (Trandolapril)
- Lotensin (Benazepril)
- Monopril (Fosinopril)
- Prinivil and Zestril (Lisinopril)
- Univasc (Moexipril)
- Vasotec (Enalapril)
5. ARBs (အေ-အာရ်-ဘီ)
Aangiotensin II receptor blockers လို့လဲခေါ်တယ်။ သွေးလွှတ်ကြောတွေ တင်းမှာကို တားပေးမယ်။ Angiotensin II ဟော်မုန်းကို ဆန့်ကျင်တာဘဲ။
- Atacand (Candesartan)
- Avapro (Irbesartan)
- Benicar (Olmesartan)
- Cozaar (Losartan)
- Diovan (Valsartan)
- Micardis (Telmisartan)
- Teveten (Eprosartan)
6. Calcium Channel Blockers (ကယ်လစီယမ်-ချင်နယ်လ်-ဘလော့ကာ)
Calcium antagonist လို့လဲခေါ်တယ်။ သွေးလွှတ်ကြောတွေ တင်းမှာကို တားပေးတယ်။ နှလုံးနဲ့ သွေးကြောတွေမှာရှိတဲ့ ကြွက်သား (ဆဲလ်) တွေထဲကို (ကယ်လစီယမ်) ဝင်လာမှာကို တားပေးတယ်။ နှလုံးခုန်တာကိုလဲ နှေးစေတာလဲရှိတယ်။
- Adalat and Procardia (Nifedipine)
- Calan, Covera, Isoptin, Verelan, and others (Verapamil)
- Cardene (Nicardipine)
- Cardizem, Cartia, Dilacor, and Tiazac (Diltiazem)
- DynaCirc (Isradipine)
- Norvasc (Amlodipine)
- Plendil (Felodipine)
- Sular (Nisoldipine)
7. Central Agonists (စင်ထရယ်-အင်တာဂွန်နစ်)
Brain ဦးနှောက်ကို သက်ရောက်တယ်။
- Aldomet (Methyldopa)
- Catapres (Clonidine)
- Tenex (Guanfacine)
- Wytensin (Guanabenz)
8. Peripheral-Acting Adrenergic Blockers အဖျားပိုင်းကို သက်ရောက်တဲ့ (အဒြီနားဂျစ်-ဘလော့ကာ)
Nerve impulses အာရုံကြောသတင်းပေးချက်အပေါ် သက်ရောက်တယ်။
- Hylorel (Guanadrel)
- Ismelin (Guanethidine)
- Serpasil (Reserpine) မြန်မာပြည်မှာ အရင် (ဘီပီအိုင်) ကနေ Reserpine နာမည်နဲ့ထုတ်တယ်။ ခုနောက်ပိုင်း သိပ်မသုံးကြတော့ဘူး။
9. Direct Vasodilators တိုက်ရိုက် (ဗေဆိုဒိုင်လိတ်တာ)
သွေးလွှတ်ကြောနံရံတွေမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပျော့နေစေတယ်။
- Apresoline (Hydralazine)
- Loniten (Minoxidil)
10. Direct Renin Inhibitors တိုက်ရိုက် (ရီနင်-အင်ဟဘစ်တာ)
ACE inhibitors နဲ့ ARBs ဆေးတွေလိုဘဲ သက်ရောက်စေတယ်။ Rennin ခေါ်တဲ့ (အင်ဇိုင်းမ်) ကို တားပေးတယ်။
- Tekturna (Aliskiren)
Posted by Dr. Tint Swe at 9:01 PM